Wararka Maanta: Isniin, Feb 12, 2018-Ruushka oo baaraya waxa sababay shil diyaaradeed oo 71 qof ay ku dhinteen
Isniin, Feberaayo, 12, 2018 (HOL) - Mas'uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegaya in ay darsayaan dhawr arrimood oo ay suurtagal tahay in ay sababeen in ay soo dhacdo diyaarad ku burburtay meel ka baxsan magaalada caasimadda ah Moscow.
Burburka diyaaradda ayaa waxaa ku dhintay dhammaan 71 qof oo saarnaa diyaaradda kuwaa oo isugu jiray rakaabka iyo shaqaale.
Diyaaradda ayaa burburtay wax yar uun kaddib markii ay ka kacday garoonka Domodedovo ee duleedka Moscow.
Baarayaasha ayaa sheegaya in ay eegayaan suurtagalnimada in burburkaasi uu ka dhashay cillad dhanka hawada ah, khalad bani'aadamka uu sababay iyo cillad farsamo.
Ilaa iyo haatan ma aysan soo hadal qaadin suurtagalnimada weerar argagixisnimo.
Dad goobjoogeyaal ayaa sheegaya in ay arkayeen diyaaradda oo gubaneysa oo cirka ka soo dhaceysa.
Sidoo kale muqaalo laga soo duubay goobta ay diyaaradda ku soo dhacday ayaa waxa ay muujinayeen burburka diyaaradda oo ku dhex dhacay baraf aad u xooggan.
Arrintan ayaa ku khasabtay hawlwadeenada ka qeyb qaadanayay gurmadka in ay baabuurtooda meel fog uga soo tagaan oo goobta diyaaraddu ku dhacday ay lug ku tagaan.
Diyaaradan oo noocedu yahay Antonov-148 ayaa u safraysay magaalada Orsk ee xadka Ruushka u la wadaago dalka Kazakhstan.
Waxaa lagu soo waramay in Diyaarada ay ku dhacday meel u dhaw Argunovo oo sideetan kiloomitir kaga began koonfur bari ee magaalada Moscow.
2/12/2018 6:09 AM EST
Isniin, Feberaayo, 12, 2018 (HOL)-Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalo saakay ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Sh/hoose.